आज ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य, तोलामा कति घट्यो त? – Ap Nepal
आज ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य, तोलामा कति घट्यो त?
काठमाडौं । साताको पाँचौँ कारोबार दिन बिहीबार सुनको भाउ पुनः ओरालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा १ हजार रुपैयाँले घटेको छ। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ८६ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ८६ हजार ५० रुपैयाँ कायम भएको छ।
हिजो बुधबार भने सुनका भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन गोल्ड ८७ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ८७ हजार ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। गत मंगलबार भने सुनको भाउ तोलामा एकैदिन १ हजार ७०० रुपैयाँले घटेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन गोल्ड ८७ हजार रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ८६ हजार ५५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
गत सोमबार तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ आइतबार भने तोलामा ५०० रुपैयाँले ओरालो लागेको थियो। आज चाँदीको भाउ पनि तोलामा ३० रुपैयाँले घटेर १ हजार २८५ रुपैयाँ कायम भएको छ।
हिजो बुधबार भने चाँदी तोलामा २५ रुपैयाँ बढेर १ हजार ३१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। गत मंगलबार तोलामा ४० रुपैयाँ घटेर १ हजार २९० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमबार तोलामा ५ रुपैयाँ बढेको थियो भने आइतबार १० रुपैयाँले घटेको थियो।
Prevआज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ बिनिमय दर ….
Nextज्योति मगरको आँखामा आँ:शु, निकै भावु,क हुदै भन्छिन् “मेरो रे,ट सोधिन्छ” (भि,डियो सहित)
धमलाले एजिलाको जन्मदिनमा यति मंहगो उपहार दिए – हे’र्नुहोस् (भिडियो)
श्रीमानको आखाँ छलेर अर्कैसंग घुम्न जाँदा गयो ज्यान, अनुसन्धानमा जारी हुदा यसो भन्छन् आफन्त(भिडियो सहित)
स्वा; दमा तितो तर उपयोगी करेलाको सेवनबाट छन् फाइदै-फाइदा हेर्नुहोस्..